ကေဘယ်ကြိုး RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ကေဘယ်လ်ကြိုးကားသတင်း၊ စီမံကိန်းများ၊ မြေပုံများနှင့်လက်ရှိသတင်းများ
Sapanca’da yaklaşık3aydır tartışmalara yol açan Teleferik Projesi’nin ÇED Raporu bulunmadığını, inşaat ruhsatı verilmesinin suç olduğu öne sürüldü TMMOB Sakarya İl Temsilcisi Salim Aydın, düzenlediği basın toplantısında, Teleferik Projesi’nde [ပို ... ]
Sapanca’daki Teleferik Direnişçilerinin Çadırına Polis Müdahalesi; Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkı, eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. Polis geniş güvenlik [ပို ... ]
Ankara ရှိ Discounts Student Subscription Card တွင်အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ၏ဘတ်ဂျက်ကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေသည့် Ankara မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန် Mansur Yavaş၏ကတိတော်များနှင့်အညီ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကို Ankara တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Belediye Meclisi toplantısını izleyen Hasanpaşa Mahallesi sakinleri, teleferik projesinin durdurulması istemiyle verilen önergenin oylamasında çekimser kalan MHP’li üyeleri protesto etti. Netgaste‘nin haberine göre, Sapanca Belediye Meclisi’nin bugün yaplan toplantısında CHP [ပို ... ]
Kartepe ကြိုး cable ကိုတင်ဒါပယ်ဖျက်
Geçen dönemin en dikkat çeken gündemlerinden teleferik projesinin sözleşmesi iptal edildi BİR YIL OLDU “Yarım asırlık hayal gerçek oluyor” sloganıyla temeli 10 Aralık 2018 tarihinde Kartepe’nin bir önceki belediye başkanı [ပို ... ]
29 Ankara ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အောက်တိုဘာလတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်, သမ္မတနိုင်ငံ 96 ။ စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နှင့်ကျင်းပသောအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကြောင့်မြို့တော်၏နှစ်။ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထူးအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်, 29 အောက်တိုဘာလသမ္မတနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများအသစ်တစ်ခုရှုထောင့်ကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မယ်။ [ပို ... ]
Sapanca Kırkpınar’da Hasanpaşa Mahallesinde yapılacak olan nin yerine karşı çıkanlar internet üzerinden imza kampanyası başlattılar. Son zamanlarda il gündemimizi meşgul eden Teleferik projesi gündemdeki sıcaklığını hala koruyor. Yapılması planlanan “Teleferik [ပို ... ]
Tranzon Metropolitan Municipality မှမြို့တော်ဝန် Murat Zorluoğlu, Gaynebakışသတင်းစာ၏ answereday တီဗီတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ Günebakışသတင်းစာ၏ခွင့်ပြုချက်အလီ Ozturk, တရားရုံးကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ သမ္မတZorluoğlu, Sumela At [ပို ... ]
Rippeway စီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်သူများသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်မည့်နေရာတွင်စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ Sapanca စည်ပင်သာယာမြူနီစီပယ်၏အမြန်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းကိုပြောင်းလဲလိုသူနှင့်စီမံကိန်းKရိယာတွင်2လခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူKırkpınarlılar, သည်ယနေ့စတင်မည်။ [ပို ... ]